राप्रपा महाधिवेशन : अध्यक्षबाहेक पदमा विद्युतीय मतदान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा उद्घाटन सत्र सकिएलगत्तै बन्दसत्र, निर्वाचन प्रक्रिया बिहीबारदेखि
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्षबाहेक पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन विद्युतीय मतदानबाट हुने भएको छ । अध्यक्षका लागि भने मतपत्रमै मतदानको व्यवस्था हुनेछ । राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको दुई वर्षअघि एकता भएपछि बुधबारदेखि काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन हुँदै छ ।
वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र नेता राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । १ सय ९९ केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये १ सय ४९ जना निर्वाचनबाट चुनिने गरी विधान संशोधन गरी राप्रपाले निर्वाचन गराउन लागेको हो । ५० जना अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउनेछन् । अध्यक्षमा सर्वसम्मत गराउन पहल भए पनि अध्यक्षसहित दुई प्यानल नै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका छन् । लिङ्देनको समूहबाट महामन्त्रीमा धवलशमशेर राणाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसके पनि थापा समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा भएको छैन ।
महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा अध्यक्ष, एक महिलासहित तीन उपाध्यक्ष, एक महिलासहित तीन महामन्त्री चयन गर्ने गरी विधान संशोधन गर्न लागिएको छ । निर्वाचनबाट चुनिने १ सय ४९ पदाधिकारी र सदस्यमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् ४९ जना महिला केन्द्रीय समितिमा रहनेछन् । महिलामा पनि दुई पदाधिकारी र ४७ जना सदस्य मतदानबाटै छानिने प्रस्ताव विधानमा राखिएको छ । ‘मतदान हुने स्थिति भएपछि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ,’ महाधिवेशन व्यवस्थापनमा खटिएका नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले भने, ‘अध्यक्षको मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्ने र अरूको विद्युतीय मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’
एमालेको १० औं महाधिवेशनमा प्रयोग भएको विद्युतीय मेसिन नै प्रयोग गरिने उनले बताए । उनका अनुसार महाधिवेशन स्थल काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ ।
महाधिवेशनमा ४ हजार ५ सय ६० प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । संघीय संरचनाअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेशबाट छनोट भएका प्रतिनिधि महाधिवेशनमा आउनेछन् । ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै २ हजार ९ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रधानले जानकारी दिए । एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा ९ जना प्रतिनिधि हुनेछन् । यसबाहेक गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरू पनि प्रतिनिधिको रूपमा आउनेछन् । तीन दिनसम्म चल्ने महाविधेशनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्र सकिएलगत्तै बन्दसत्र गर्ने तालिका छ ।
निर्वाचनको प्रक्रिया भने बिहीबारबाट मात्रै सुरु हुनेछ । मतदाताको नामावली बुधबार नै महाधिवेशन स्थलमा टाँस्ने व्यवस्था मिलाइने महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बन्दसत्रमा अध्यक्ष थापाले राजनीतिक, पशुपतिशमशेर जबराले सामाजिक र प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक कार्यपत्र पेस गर्नेछन् ।
त्यस्तै विधान संशोधन सुझाव समितिका संयोजक नीरञ्जन थापाले कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको विधान संशोधनको मस्यौदा बन्द सत्रमा पेस गर्नेछन् । ‘पहिलो दिन विधान संशोधन गरेर बिहीबारदेखि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ महाधिवेशन प्रचार समितिका संयोजक मोहन श्रेष्ठले भने । उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै अन्य पार्टीका नेताहरू पनि आउने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०७:४७
मंसिर १५, २०७८ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — राणा शासन कालमै नेपालमा रग्बी खेल्न थालिएको थियो । तैपनि यो खेल लामो अवधिसम्म फोहोरा दरबार र केही दूतावासमै सीमित थियो । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै टाढा थियो, नजिक ल्याउने प्रयास भएको थिएन । त्यसैले २०६० को दशक आइपुग्दा धेरैले भन्थे– नेपालमा पनि रग्बी खल्छ र ?
नेपाल रग्बी संघ २०५२ सालमै स्थापना भएको थियो । तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता गर्नेबाहेक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नेबाहेक संघले केही गरेन । पूरै निस्क्रिय रह्यो । यसबीच देशमा जनआन्दोलन भयो । लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्र आयो । त्यही अभियानमा २०५६ सालदेखि माओवादीको पूर्णकालीन सदस्यता लिँदै भूमिगत भएका टंकलाल घिसिङ पनि बाहिरी दुनियाँमा फर्किए । उनले युवा तथा खेलकुदमन्त्री हितबहादुर तामाङको प्रमुख स्वकीय सचिवको रूपमा खेलकुदमा ‘इन्ट्री’ गरे । तामाङ मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै घिसिङको खास काम पनि सकियो । तर, उनले खेलकुद नियालिरहे ।
मन्त्रीको स्वकीय सचिव भएको तीन वर्षपछि घिसिङ नेपाल रग्बी संघको अध्यक्ष (सन् २०१२) चुनिए । निस्क्रिय रहेको संघमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू खोजी–खोजी साधारणसभा गरेरै उनी रग्बीको नेतृत्वमा पुगेका थिए । उनलाई खेल बुझ्नै एक वर्षजति लाग्यो । त्यसपछि उनी चुप बसेनन्, एकपछि अर्को गर्दै खेल व्यवस्थापनमा ‘ट्राइ’ मार्न थाले । उनकै आगमनपछि संघले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्‍यो, जसमा खेलाडी छनोट गर्दै राष्ट्रिय टिम बनायो र अन्तर्राष्ट्रिय रग्बीमै नेपालले ‘डेब्यु’ गर्‍यो । झट्ट हेर्दा बलको खेलजस्तै लाग्ने रग्बीमा पुरुषलाई मात्रै होइन, महिलालाई पनि उत्तिकै सक्रिय बनाइयो । नेपालका पुरुष र महिलाका दुवै राष्ट्रिय टिमले ६ वर्षयता नियमित रूपमा महादेशीय प्रतियोगिता ‘एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी’ मा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । नेपाली रग्बी टिमले ओलम्पिक छनोट नै खेल्यो ।
राखेपको सदस्यसचिवमा सोमबार नियुक्त हुनुअघि दोस्रो कार्यकाल पूरा नहुँदै संघको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका घिसिङ भन्ने गर्छन्, ‘जबसम्म ग्रासरुट र स्कुल स्तरबाटै खेलाडी उत्पादनमा ध्यान दिइन्न तबसम्म खेलको विकास र सफलता सम्भव छैन ।’ त्यसैअनुसार योजना बनाए । संघले महिला र पुरुष दुवैमा सन् २०१४ देखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता, क्लब च्याम्पियनसिपसँगै अन्तर स्कुल, यू–१८ प्रतियोगिता नियमित आयोजना गरिरहेको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामामात्रै होइन, टिमको तयारी, खेलाडी उत्पादन र खेलको विकासमा पनि संघ प्रभावशाली देखिएको छ ।
उनले सुरुमा खेलाडी नभएपछि साथीभाइ र आफन्तलाई बोलाएर अभ्यास गराउँदै टिम तयार गरेका थिए । कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देशमा लकडाउन हुनुअघि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, पोखरा, कैलाली, हेटौंडाका ५५ स्कुलमा रग्बीको नियमित प्रशिक्षक हुन्थ्यो । पछिल्लो अन्तरस्कुल प्रतियोगितामा ३२ विद्यालयका टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
संघले ३२ वटा जिल्ला शाखा विस्तार गरेको छ । संघले महामारीकै दौरान प्रदेश कमिटी पनि बनायो । स्कुलमा रग्बीको प्रशिक्षण दिने भनेपछि सात प्रदेशबाट ३ सय ४० स्कुल तयार भएको सूची बनेको संघका सदस्य एवं पूर्वखेलाडी विनोद लामाले बताए । श्रीलंकन प्रशिक्षक राधिका हिताराचीलाई ल्याएर राष्ट्रिय टिमलाई ट्रेनिङ दिएको संघले लेभल २ र एडुकेटर २ जनासहित प्रशिक्षकको संख्या ३० पुर्‍याएको छ भने निर्णायक १२ जना बनाएको छ । गतिविधि बढाउँदै लगेको संघले गत वर्ष विजय खड्कालाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो ।
क्लब च्याम्पियनसिपकै प्रभाव हुन सक्छ, पाँच क्लब (गोर्खाली, हिमालयन टाइगर, चितवन वोरिस, बडिमालिका र आकाशभैरव रग्बी क्लब) मा महिला र पुरुष दुवैमा फिप्टिन्स र सेभेन्स टिम छन् । नेपाल वुमेन्स रग्बी क्लब पनि निकै सक्रिय छ । संघले नेपालप्रति विश्व रग्बीलाई आकर्षित गर्न यही नोभेम्बर (२०२१) मा हिमालयन रग्बी फेस्टिभल आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो, जहाँ फ्रान्स, जापानलगायतका १ सय बढी खेलाडी आउन इच्छुक थिए । संघले महामारीका कारण उक्त फेस्टिभल २०२२ मे महिनामा सारेको छ । संघले रग्बी रंगशाला बनाउने योजना अघि सार्दै डीपीआर तयार गरिसकेको छ ।
रग्बी विश्वकप २०१९ को ट्रफी टुर नेपालमा पनि ल्याइएको थियो । विशेष सुरक्षा र चासो दिइने यो ट्रफीको खुम्बुमा खिचिएको तस्बिरले विश्वव्यापी चर्चा पाएको थियो । त्यससँगै संघको सक्रियकै कारण हुनसक्छ सन् २०१५ मा एसिया रग्बीको एसोसिएट सदस्य भएको नेपालले २०१८ मा पूर्ण सदस्यता पायो । अक्टोबर २०२० मा आएर वर्ल्ड रग्बीको एसोसिएट सदस्यता पायो । घिसिङ पनि फड्को मार्दै दुई वर्षअघि एसिया रग्बीको कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित भए । उनी एसिया रग्बीको ‘अडिट एन्ड रिस्क कमिटी’ को प्रमुख नै भए । रग्बीलाई अघि बढाउँदै घिसिङ देशकै खेलकुदको सर्वोच्च संस्थाको प्रमुख कार्यकारी भएका छन् । एउटा खेलको विकासमात्रै होइन, पदक जित्दै देशकै गौरव बढाउने खेलहरूको विकास गर्दै सुशासन कायम गर्ने अवसरमा कसरी अघि बढ्छन् ? केही समय कुर्नैपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०७:४५